Tsapa fa miakatra ny lanjan` ny lenta eto Madagasikara ka hapetraka amin’ny maha izy azy sao midina eo indray, hoy izy tamin’ny resaka nifanaovana taminy tetsy Tsimbazaza omaly. Handeha ny fifidianana Filohan’ny Federasionina Malagasy na ny FMF, ka amin’ny maha Filohana Klioba azy no nilazany fa misy fepetra ao anatin’ny lalàna mifehy ny federasiona na olona efa nikirakira na nandalo ny tontolon` ny kitra. Inoana fa nahafeno fepetra ireo olona hirotsaka ho filoha, ary olona hiezaka hampiakatra avo hatrany ny lentan’ny baolina kitra Malagasy. Maro ny andrasana aminy satria tsy maharaka intsony ireo fotodrafitrasa, eo ihany koa ny fametrahana ligy maro samihafa izay manana maha izy azy. Tsy adinoina koa ny “section” sy ny klioba tsy tokony hatao an-kilabao intsony. Tsy tokony ny klioba intsony no hivesatra samirery fiahiahina rehefa hivoaka ny tanindrazana satria voninahi-pirenena no harovana, ary ekipa-pirenena ireny.